ebiyelweyo zeplastiki indawo metal
Inaliti plastic sikuyo & uyihlanganise uphoswe
Shenzhen Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd. i-stop Enye ehlabathini umboneleli kwi OEM & ODM uhlobo Ulwenziwo lokuthile Service Electronic ugubungela PCB azenzi, inxalenye ukuthengwa, ibandla, iinkqubo, imisebenzi yovavanyo, inaliti ngumngundo zeplastiki, zokubopha kunye namalungiselelo ukusukela ngo-2008.
Amava imveliso yethu lufaka sixhobo ekhaya, umthengi electronic, ulawulo mveliso, inkqubo alarm emlilweni, sixhobo ikhitshi, izixhobo zonyango, inkqubo imoto odiyo, ikhompyutha kunye zonxibelelwano, njl
Thina 8 imigca ibandla epheleleyo, oquka iimatshini SMT isantya eliphakathi ukusuka yesantya eliphezulu Juki Brands, Mkhupheleni-free oomatshini wavesoldering kunye oomatshini reflow, oluzenzekelayo solder lomshicileli paste, X-reyi kumhloli kunye nesikhululo kwakhona BGA, abahloli ICT, izixhobo AOI, nezinto emidlalweni uvavanyo fct kwakunye ilebhu yethu uvavanyo zonke iintlobo uzinzo kunye uvavanyo nokuthembeka.
Sikholelwa ezisemgangathweni kunye nenkonzo, nto leyo izinto ezibalulekileyo ukuze aphumelele imarike. Besisoloko sizinikezele ekuphuculeni umgangatho kunye enkonzo nokuphuculwa kweendawo zethu kwakunye namava abaxhasi ingxelo. Iqela lethu yokuthengisa kwakhona brilliant kunye nobuchule ingcali zonxibelelwano kunye ukusabela ngokukhawuleza imibuzo yakho.
Singathanda ukwenza intsebenziswano win-win kunye nani. Nceda uqhagamshelane nathi namhlanje.